ဓားပြကြီး mlm နဲ့တွေသောအခါ ~ Myanmar Anti Mlm Group
Myanmar Anti Mlm Group
Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae
ဓားပြကြီး mlm နဲ့တွေသောအခါ
9:23 AM Unknown
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာထဲ ကို လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ ဓားပြ တွေ ဝင်လာပြီး အဲ့ဒီရွာကို ဓားပြတိုက်သတဲ့...အရင်ဆုံး ရွာလူကြီးအိမ်ကို ဝိုင်းလိုက်ပြီး ရွာသားတွေ တစ်ယောက်မကျန် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရွေ
ငွေ လက်ဝတ်ရတနာတွေက အစ ယူလာခဲ့ဖို့ အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ ရွာသားတွေ အကုန်ရောက်လာပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ဓားပြခေါင်းဆောင်က ”ကဲ..ရွာ လူကြီးက စပြီးတော့ ရှိသမျှ ရွှေ ငွေ လက်ဝတ်ရတနာတွေကို ငါတို့ကို လာပေးစမ်း” ဆိုပြီး ခိုင်းလိုက်တယ်။ ရွာသားတွေ ခမြာလည်း မပေး ရင် အသက်အန္တရယ် ရှိတာကြောင့် သူတို့ ပါသမျှ ပစ္စည်း တွေကို ထုတ်ပေးသတဲ့။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ထူးထူးခြားခြား သူ ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ကို မပေးပဲနေတဲ့ ရွာသားလေးတစ်ယောက်ကို ဓားပြခေါင်းဆောင်က ရိပ်မိသွားတယ်။
”ဟေ့ ဟိုနောက်က ကောင် မင်း ရှိသမျှ ပစ္စည်း ယူလာပြီး ငါ့ကို လာပေးစမ်း” လို့ အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီလူငယ်က ရှေ့ ကို ရဲရဲဝံ့ ဝံ့ ထွက်လာပြီး သူ့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု တွေ မပေးသေးခင် ဓားပြခေါင်းဆောင်ကို ပြောစရာတစ်ခုရှိပါတယ်လို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ ဓားပြခေါင်းဆောင်နား ကပ်ပြီး ဘယ်သူမှ မကြားအောင် စကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တယ်တဲ့...
ဓားပြခေါင်းဆောင်က သူ့ လူတွေကို ကဲ သူတို့ပစ္စည်းတွေ ပြန်ပေးလိုက်တော့ ငါတို့ ဒီရွာက လစ်မှ ဖြစ်တော့မယ် ဆိုပြီး တချိုးတည်းပြေးပါလေရော...
ရွာသားတွေ အကုန် အံ့ အား သင့်ကုန်တာပေါ့..ဘာလက်နက်မှ မပါတဲ့ဒီ ရွာသားလေးတစ်ယောက် စကားလေးတစ်ခွန်းပြောလိုက်တာနဲ့ ဒီဓားပြတွေ ပစ္စည်းပါ မယူတော့ပဲ ဘာလို့ အကုန်ထွက်ပြေးကုန်ကြတာလဲဆိုပြီး ဒီရွာသားလေးကို မေးကြတယ်..
”ကျွန်တော် က MLM ဝင်မလား ဒီ ဓားပြတိုက်တာထက် ဝင်ငွေပိုကောင်းမယ် ဆိုပြီး ပြောလိုက်တာပါ ” ဆိုတော့မှ တရွာ လုံး ပွဲကျသွားတော့တယ်...
ဓားပြ ခေါင်းဆောင်ကြီးက ခပ်လှမ်းလှမ်းရောက်မှ အကျယ်ကြီးအော်ပြီး ပြောသွားတာက...
”မင်းတို့မြဲမြဲ မှတ်ထားဖို့က ငါတို့ ဓားပြတိုက်တယ်ဆို တာ မင်းတို့ရဲ့ ပစ္စည်း ကို ငါတို့ လက်ထဲ ရောက်လာဖို့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုထဲပဲကွ...ပစ္စည်းလည်း ယူရဦးမယ် ပြီးတော့ မင်းတို့ မကြာခင် ချမ်းသာတော့မှာ ဆိုတဲ့ မက်လုံး ကို ဘယ်တော့မှ မပေးနိုင်ဘူးကွ...အကုသိုလ်ချင်းတူတူ ကို မင်းတို့ က မုသာဝါဒ ပါ အဆစ်ပါနေတယ် ” တဲ့......
Chan Nyein Win / MLM သရော်စာ
Download Anti Mlm Apk
Dr Aung Htun Thet
DVB MLM Debate
MLM Company Leaders
ပိုစ်အသစ်တင်တိုင်း email ထဲပို့ပေးပါ့မယ် Email ချန်ခဲ့ပါ
5 Plus (1)
7day news (4)
B2B magazine (1)
Burma Ayawady (1)
Eleven News (5)
News Watch (1)
Popular journal (2)
RFA Burmease (1)
The Voice Journal (6)
Mlm company နာမည်အလိုက်ဖတ်ရှုရန်
Aim Star (48)
B Hip (1)
Double Crane (16)
S Nature (1)
Shine Hope (2)
Anti Mlm Blog များ (19)
Anti MLM ကဗျာ (2)
Anti Mlm ကာတွန်း (4)
Anti Mlm လှုပ်ရှားမှုများ (32)
Business Scam (16)
Mlm Companies များ၏အတွင်းရေး (3)
Mlm ကာတွန်းများ (4)
Mlm စနစ်အကြောင်း (14)
Mlm စနစ်ကြောင့်နစ်နာခဲ့ရသူတို၏ရင်ဖွင့်သံများ (39)
Mlm ထုပ်ကုန်များအကြောင်း (30)
Mlm ပညာပေး ဗွီဒီယိုများ (24)
MLM ဖက်မှဖြေရှင်းချက်များ (2)
Mlm လုပ်ငန်းများအပေါ်သတင်းမီဒီယာများ၏အမြင် (19)
Mlm လုပ်ငန်းအပေါ်ပညာရှင်များ၏အမြင် (9)
Mlm သတင်းများ (13)
MLM သရော်စာ (12)
MLM ဆောင်းပါးများ (231)
MLM ကြော်ညာများ (1)
Aron Mg (5)
Ashin Vilasaggalankara (1)
Aye Chan Aung (4)
Chan Nyein Win (5)
Cherry Lin Latt (4)
Dr. KYAW THET SOE (1)
Golden Egg (4)
Htun Htun Oo (3)
Khant Zaw Htet (2)
Kyaw Min Lwin (4)
Kyi Lwin Phyo (2)
Ma Rose (6)
Maung Maung Oo (1)
Myat Phyo Kyaw (6)
Py Min Khant (3)
Robert K Sain (8)
Thet Paing Tun (3)
Tin Zaw (4)
U Htun Naing (1)
Wathan Min (1)
Win Oo (5)
Ye Htut (2)
Ye Myo Thant (6)
Zayya Sopyay (1)
ဖိုးစမ်းချောင်း (GG) (1)
MLM ဆိုတာဘာလဲ ဘာကြောင့်ဆန့်ကျင်ရတာလဲ
Multi-Level marketing (MLM) ကို ပိရမစ်ပုံစံရောင်းချခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် နက်ဝခ်မာ့ကက်တင်း Refer မာ့ကက်တင်း လို့လဲ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ် ပီရမစ်ပုံစံ Marketing Strategy ဖြစ်ပြီး သီအိုရီအရသာ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားပစ္စည်းများ ဖြန့်ချီရောင်းချရင်းဝင်ငွေရရှိကြောင်းပြောဆိုတတ်ပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ လူတွေကိုတိုက်ရိုက်လိုက်လံမိတ်ဆက်ရောင်းချခြင်းအပြင် လူတွေကိုဖိတ်ခေါ် (လူဆွယ်ပြီး)ရတဲ့ Downline မန်ဘာ အဖွဲ့ဝင်(အောက်လိုင်း) လို့ခေါ်တဲ့လူတွေဆီကငွေတွေကို ပဲအဓိကထားအဆင်ြ့ပန်ပေးလိမ့်ရှိပါတယ်။ Mlm သမားတွေဟာ ယျေဘူယျအားဖြင့် ဖောက်သည်တွေဆီကို တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း Direct Selling ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုအသုံးချရောင်းချခြင်း Relactionship Marketing ပါးစပ်နဲ့ကြော်ညာရောင်းချခြင်း Word of mouth maketing တွေကိုပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်တွေကိုပဲ တွေကပဲ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာပြီး ဆင့်ပွားလူဆွယ်ပြီအကျိုးအမြတ်ရရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာအများပြည်သူတွေအတွက်ထိခိုက်နစ်နာတယ်လို့ယူဆထားတဲ့တဲ့ဆန့်ကျင့်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Online Community Group တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Anti Mlm Admin Multi-level marketing (MLM), also called pyramid selling, network marketing,and referral marketing,isacontroversial, pyramid-shaped marketing strategy where profit is theoretically derived from two revenue streams: from direct sales to customers and from commission based on the sales of recruited team members, also known as down line distributors. MLM salespeople are expected to sell products directly to consumers by means of relationship referrals and word of mouth marketing. They are also incentivized to recruit others to join the company as distributors. Sources for Wikipedia MLM https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-level_marketing
Successmore..member. ဝင်တွေ..MaRose မောင်ကို..သူတို့ပစ္စည်းလေးဝယ်အားပေးပါအူးဆိုလို့..သွားတိုက်ဆေး..(8000).Body Cheer.('6000)လူကိ...
အချိန်ပိုင်းအလုပ် မလိုချင်ဘူးလား? အပိုဝင်ငွေ မလိုချင်ဘူးလား? ငွေကြေးလွတ်လပ်ခွင့် မလိုချင်ဘူးလား?
"လောဘ" ဒီစကားလုံးမှာ negative sense ခံစားရတယ်။ MLM လုပ်ဖို့ စဆွယ်ရင် ခင်ဗျားမှာ"လောဘ"ရှိလား သူတို့မမေးဘူး။ "လော...
MLM company တွေမှာ လုပ်နေတဲ့ mlm member များကို လေ့လာမိခြင်း
MLM company တွေမှာ လုပ်နေတဲ့ mlm member များကို လေ့လာမိခြင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ကျုပ် mlmတွေကို သုံး...
Coinspace ဘာလဲ ဘယ်လဲ ။
Coinspace ဘာလဲ ဘယ်လဲ ။ ===================== အရင်ဆိုရင်တော့ ဦးဆောင်သူဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ပြောဦးမလဲပဲ ဒါပေမဲ့ Coinspaceမှာတော့ လက...
FillyMor ဖြေရတာမောတဲ့ဆေး ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
FillyMor ဖြေရတာမောတဲ့ဆေး အရေးပေါ်ကာလစီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီကို ဖွဲ့လိုက်ပြီဆိုတော့ ဆန္ဒပြခံရမှာ အရင်လောက်တော့ ကြောက်စရာ မရှိလောက်တော...
ပိုလန် သောက်သင့်မသောက်သင့် ဒေါက်တာ တင့်ဆွေအမြင်
Bee pollen ပန်းဝတ်မှုံ အာဟာရ ဘယ်ကလဲသိတယ်ဟုတ် Mlm လေ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ မြန်မာပြည်မှာ ကင်ဆာဖြစ်ရင် တတ်ယောင်ကား တွေနဲ့တွေ့ပြီး ဒုက္ခရောက်ကြတာ ...
Iglobad leader မနန်းအကောင့်
ဒါက i globe myanmar ရဲ့ Responsiable person လို့ယူဆရသူရဲ့ Profile ပါ။ လိမ်လည်တာသေချာပြီဆိုတာနဲ့ နစ်နာသူများစုစည်းပြီး ပြစ်မှုဆိုင်ရ...
Unicode #တိုငျစာရေးနညျး ( မူရငျးရေးသားသူ #WaineNuAye ) သို့ / ပွညျထဲရေးဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးကြျောဆှေ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာန ...
Unicity နှင့်​ ကျွန်​​တော်​.....အပ်ိုင်း(၁)(၂)(၃)
Unicity နှင့်​ ကျွန်​​တော်​.....အပ်ိုင်း(၁)(၂)(၃) လွန်​ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်​ခွဲ​ကျော်​​လောက်​က​ပေါ့..အိမ်​​ထောင်​ကလဲကျ ​ကျော င်းကလဲတစ...
Copyright © Myanmar Anti Mlm Group | Powered by Blogger